गर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुन्छ? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर आइतबार, पुस २५, २०७८, १७:३८:५०
प्रश्न: गर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुन्छ?
उत्तर : हुँदैन।
गर्भावस्थामा खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुँदैन। कोभिड–१९ विरुद्धको खोपले गर्भपान हुने, कम तौलको बच्चा जन्मिने, समय नपुगी जन्मिने, भन्ने कुरा गलत हुन्।
गर्भावस्थामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका महिलाहरुले समय नपुगी बच्चा जन्माउने र कम तौल भएको बच्चा जन्माउने जोखिमको खोपसँग कुनै सम्बन्ध छैन। सबै गर्भवती महिलाहरुलाई उक्त खोप गर्भवती भएको पहिलो तीन महिना पछि दिन सकिन्छ। त्यसैले ढिला नगरी आफूलाई पायक पर्ने खोप केन्द्रमा समयमै पुगेर खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल समेत गरेको छ।